We Fight We Win. -- " More than Media ": ဦးခင်ညွှန့် ဘုန်းကြီးဝတ် ၊ မပျော် ၃ နှစ် ၊ ပျော်ရင် တသက်ဝတ်မည်ဟုဆို
ဦးခင်ညွှန့် ဘုန်းကြီးဝတ် ၊ မပျော် ၃ နှစ် ၊ ပျော်ရင် တသက်ဝတ်မည်ဟုဆို
ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ်တွင် ၂၀၀၃၊မေလကဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်ကြံမှုကို စစ်အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပြုအဖွဲ့မှအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်ကို ထောက်လှမ်းရေးမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးခင်ညွှန်မှ ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာ့စစ်အရာရှိများအကြားတွင် ပြသနာများကြီးထွားနေကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ ထိုသို့ဒီပဲရင်းအကြောင်းကိုမီဒီယာသို့ပြောကြားပြီးနောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးခင် ညွန့်အပါအဝင် သားနှစ်ဦးသည် သိက္ခာထပ်၊ ရဟန်းခံရှင်ပြုပွဲကို ယနေ့နံနက် ၈ နာရီတွင် တာမွေမြို့နယ် တာမွေလေးရပ် ကွက်၊ ပင်ရွှေညောင်လမ်းရှိ အောင်မြေဗောဓိဓမ္မရိပ်သာ အလိုတော်ပြည့်ေ ကျာင်းတိုက် တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။အဆိုပါ ရဟန်းခံရှင်ပြုပွဲကို ဦးခင်ညွန့် နှင့် ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေ တို့မှ အမှူးပြု၍အလှူဒါနပြုလုပ်ခဲ့ ပြီး ဦးခင်ညွန့်အပါအဝင်သားနှစ်ဦး နှင့်မြေး ၅ ဦးတို့မှ သာသနာ့ဘောင် သို့ ဝင်ရောက်သွားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ သာသနာဘောင်သို့ဝင်ရောက်မှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး
မပျော်လျှင် ၃ နှစ် ၊ ပျော်လျင် တသက် ၀င်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပြည်သူအများစုကတော့ တသက်လုံး ၀တ်စေချင်ကြောင်းသိရပါတယ်။
Now you realize the truth value of Buddhism "HAPPEN AND GONE"
Good Boy. Now you wish to becomeagood man. Corect?
The HELL IS WAITING FOR YOU FOR YOUR EVIL THINGS(that is "killing the innocent citizens and conduted uncountable criminals to the nations for 50 years")
ဘာပဲပြောပြော ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှူ တစ်ကယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သက်သေခံရမယ်၊
ဘယ်သူ အကွက်ချ စီစဉ်တာလဲံ၊ တရားခံအစစ်ကို ဖေါ်ထုတ်ရမယ်။
ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ အဆုံးသတ် မခံနိုင်ဘူး။
ကျနော်တို့လည်း အဲဒါ ရိုက်မယ်ဆိုတာ သိပြီ၊ နောက်တခါဆို ရိုက်မယ်ဆိုတာသိပြီ၊ ရိုက်လည်း စရိုက်ပြီ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့လည်း ရှောင်လိုက်တာ။ နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကားကိုမောင်းတဲ့ကလေးက သူ့ဟာနဲ့သူ မောင်းထွက်သွားတာဗျ။ အဲဒါနဲ့ လွတ်သွားတာ။”
ဒီပဲယင်း ရိုက်နှက်မှုကြီးမှာ ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရသူ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရဦးတင်ဦးက ပြောပြခဲ့တာပါ
Mother fucker Khin Nyunt.driver Driver drive away by himself.
9 April 2012 at 05:57
နောက်မကျပါဘူး။ သူ့ မှာ တစ်စုံတစ်ခု ပြောစရာ သမိုင်းမှာ ချန်ထားချင်တာတွေ အများကြီးရှိဦးမှာပါ။အခွင့်သာပေးခဲ့ရင် နောက်ထပ်ပြောစရာတွေ မရှိဘူး ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒီလို အရမ်းကာရော ဝေဖန် ဆဲဆိုတာတွေ တော့မလုပ်သင့်ဘူး ထင်တယ်။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ သူ ကိုယ်တိုင် သူ့ မိသားစုနဲ့ အတူ တစ်ဘ၀စာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ရဲ့ ဒါဏ်ကို ပြန်ခံခဲ့ရတော့ နာကျဥ်းနောင်တ ရနေမှာ တော့အသေချာဆုံးပဲ။ နည်းနည်းလေးပဲပြောရသေးတယ်။ ခင်ဗျားတို့ က အသိဥာဏ်ရှိရှိစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ၉၀ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလဲ စစ်အစိုးရစစ်ခုံးရုံးတင်မယ် ဆိုလို့ နှစ်နှစ်ဆယ် ထပ်ကြာသွားခဲ့ပြီးပီ။ Singapore မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း မဆုံးခင် ၈၈နဲ့ ဒီပဲယင်းအကြောင်းတွေ ဖွင့် ဟ၀န်ခံသွားတာကိုအသံသွင်းခဲ့တယ် လို့ ဦးအောင်လင်းထွဋ်ပြောသွားတာမှန်ရင် အဲဒါကို ဖော်ထုတ်ကြပါလား။
For 50 years since 1962...
1)You exactly follow up the wroung political system established by your teacher,JUNTA,NAY WIN
2)Setting up all wroung economic system making the country the poorest in the world.
3)But all Military Gangsters become richer,healthier and living longer.
3)Conducted uncountable criminals to innocent citizens in Burmese History.
Now you show us asamonk when the COUNTRY IS GOING DOWN DEEPER & DEEPER WITH GREAT ACCELERATION and MOMENTUM DUE TO THE IMPACT OF 50 YEARS MISTAKES OF WROUNG POLITICAL and ECONOMIC SYSTEM.
If you really realize ON WHAT YOU HAVE DONE......
Show yourself hanging up in the public (BUT NOT AS A MONK)
If so, we will record you AS A NATIONAL HERO.
how come it's become 3years, he said justaweek in monkhood. did u intentionally alter it, ko moe thee??
ခု ချိန် ကတော့ ဦးခင်ညွန့် ဘာမှ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး။ နအိုပေါင်ကျိုး တကောင် ရှိနေတယ်လေ။ အမှန်တရား အတွက် ဦးခင်ညွန့်လည်း အပါယ် မလားမှီ အသံခွေ တခွေလောက် သွင်း ချန်ရစ် ခဲ့ စေချင်ပါသည်။
So does ( Double edges) U Aung Gyi ( Now in USA?).
မုံရွာ ခမရ(16) တပ်ရင်းမှူး Lt.Col Ko Ko.Now in EPC rangoon. He is the primary witness/အဓိက တရားခံ။
11 April 2012 at 02:59